Dzimwe nzira dzeMetasploitable kukwanisa kurwisa | Linux Vakapindwa muropa
Kugovana nengozi kune chinangwa chekudzidzira
Iko kune kwakawanda kana kushoma kutapurwa kugoverwa. Takatotaura nezvevamwe vavo muzvinyorwa zvedu uye kuongorora. Semuenzaniso Whonix uye TAILS mimwe mimwe mienzaniso yeakavimbika distros mune izvi. Asi isu tataurawo nezvevamwe vakaita seaya anoshandiswa nevanoba uye kuita ongororo dzekuchengetedza.
Mubatsiri wevabheki uye avo vari kutanga munyika yekuchengetedza, vanofanirwa kuve nzvimbo isina kuchengeteka, nekumisikidza kwekumisikidza uye zvimwe zvekuchengetedza bugs zvakagadzirwa nechinangwa kudzidzira kupinza bvunzo uye kurwisa Izvi zviripowo uye isu tine muenzaniso wakanaka mu Kusanzwisisika (yakavakirwa paUbuntu).
Kunze kwe Kusanzwisisika (mushanduro dzayo dzakasiyana) kune mamwe maLinux distros mapurojekiti erudzi urwu. Ndezvipi? Zvakanaka semuenzaniso:
Dhamu Inotambudzwa Linux: imwe distro yakafanana chaizvo neMetasploitable, asi zvichibva paSlackware.
LAMPSecurity: yeiyo kufarira mukurwisa kweseva dzeLAMP, zvichibva paCentOS.
De-ICE Pentest: one distro inonakidza kwazvo kudzidzira kurwisa ...
Dzimwe ISOs dzemakina akafanana akafanana: Holynix, pWnOS, OWASP, Kugura-Lab, Moth, Katana, nezvimwe.
Con Kali Linux kana imwe yakafanana distro uye muchina kana wepanyama muchina une imwe yeaya ma distros akaisirwa, unogona kunakidzwa uchirwisa system uye iwe uchadzidza zvakawanda. Unogona kutamba mitambo yekutapa mureza nekuzvimisira zvibodzwa. Inonakidza zvechokwadi! Ndinokukurudzira kuti uite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kugovana nengozi kune chinangwa chekudzidzira
Linux Lite 2.6 iri kunze
XDM, vhezheni itsva yeakanakisa multiplatform download maneja